Monday July 06, 2020 - 08:04:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar soo baxay ayaa sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay mid kamid ah wasiirrada ugu saameynta badan dalka Itoobiya si weyna ugu dhowaa Abiy Axmed.
Mucaaradka Oromada ayaa sheegaya in laxiray wasiirka difaaca
Saraakiisha mucaaradka qowmiyadda Oromada ayaa sheegay in xabsi guri lagusoo rogay Lamme Magarse oo ahaa wasiirka Gaashaandhigga kadib markii laga qaaday xilka uu hayay.
Henok Gebra Gabisa oo kamid ah siyaasiyiinta qowmiyadda Oromada ayaa qoraallo dhowr ah oo uu ku faafiyay baraha bulshada wuxuu ku sheegay in shaqada laga eryay wasiirka G/dhigga kadib markii uu latacaadufay Jowhar Muxamed oo maalmo ka hor laxiray.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Lamme Magarse laga qaaday dhammaan ciidamadii ilaalada u ahaa islamarkaana loo diiday in uu lahadlo warbaahinta, xaaladda Itoobiya ayaa ah mid aad ucakiran waxaana jaran dhammaan war isgaarsiinta sida Taleefannada iyo Internetka.
Melleteriga Xabashida ayaa wada howlgallo uu kula dagaallamayo jabhadaha hubaysan ee Oromada kadib markii kacdoonkii rabshadaha watay uu isku bedelay mid hubaysan, hubanti la'aan ayaa ka taagan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Oromia oo ay ka socdaan howlgallo melleteri.
Itoobiya oo ka digtay in dowladda Masar ay saldhig Melleteri ka furato deegaannada 'Somaliland'.
Dowladda Masar oo ku hanjabtay in aysan gacmaha ka laaban doonin biya xireenka ay Itoobiya ka dhisayso Webiga Niil.